Alsatian Mareykan ah: Hagaha ugu dambeeya eeyaha eyga u eg - Taranka
Raadinta a Eey u eg yeey ? Ma waxaad dooneysaa bakoorad weyn sida a wehel ? Waa inaad heshaa Alsatian Mareykan ah.
Ugaadhadan dhifka ah waxay u ekaan karaan yeey, laakiin iyagu waa debecsan iyo saaxiibtinimo khalqiga.
Waxay sidoo kale leeyihiin sheeko asal ah oo weyn oo horseed u ah muuqaalkooda, dabeecad cajaa'ib leh, iyo caafimaad wanaagsan.
Maxaa kale oo ka jira bahalkan dahsoon? Akhriso si aad waxbadan uga ogaato Alsatian-ka.
Waa maxay Alsatian Mareykan ah?
Muxuu u egyahay Alsatian Mareykan ah?
Wehel Saaxiib Weyn
Sidee loo daryeelaa Alsatian-kaaga Mareykanka ah?
Alsatian-ka Mareykanka ma leeyahay wax dhibaato caafimaad ah?
Sideen ku helaa Alsatian Mareykan ah?
American Alsatian iyo Noocyo Kale oo La Mid ah
Alsatian-ka Mareykanka ma yahay eeyga kugu habboon adiga?
Alsatian-ka Mareykanka (oo loogu dhawaaqo AL-SAY-SHAN) waa nooc ballaaran oo loo sameeyay wehelnimo.
Badanaa, eeyaha wehelka ahi way yar yihiin. Marka waa dhif iyo naadir in bakoorad weyn sida Alsatian ay qaadato door la mid ah.
Xagee bay ka yimaadeen?
Dhammaantood waxay bilaabeen 30 sano ka hor Mashruuca Dire Wolf.
Taariikhda Alsatian ee Mareykanka: Mashruuca Dire Wolf
Intii lagu guda jiray xiisaha xiisaha wolfdogs ee 1987, Lois Denny (oo hadda loo yaqaan Lois Schwarz) wuxuu rabay canug yey u eg oo aan lahayn yeeyga dhiigga tan iyo markii ay isku muujiyeen inay yihiin xayawaan adag.
Schwarz wuxuu si gaar ah u doortay yeeyda xun si uu u abuuro eey u eg weey, sidaa darteed magaca mashruuca. Dhabta ah yeey dheh waa taariikh hore waxaana loo yaqaanaa inuu ka mid yahay yeeyda ugu waa weyn weligeed jirtay. Way bakhtiyeen xilligii Pleistocene Epoch - taasi waxay ahayd 11,000 sano ka hor!
Sannadkii 1988, Schwarz wuxuu soo saaray qashinkii ugu horreeyay isagoo isku daraya Alaskan Malamute iyo Jarmal Shepherd - asal ahaanna wuxuu magacaabay magaca, Waqooyiga Ameerika Shepalute . Sannado ka dib, waxay go'aansatay inay ku darto Ingiriisiga Mastiff iyo isku-dhafka Anatolian / Great Pyrenees.
Waxay dooratay eeyahaas sidaa darteed Alsatian-ka Mareykanka wuxuu yeelan doonaa:
Alaskan Malamute iyo Jarmal Shepherd’s cabbirka madaxa, jirka, muruqyada, cagaha, dabada gaaban, iyo dabeecadda (dhif naadir).
Ingiriisi Mastiff madax weyn iyo laf wareegsan oo buuxa.
Anatolian iyo Great Pyrenees mix’s dhakada, muuska, dhererka, dabada gaaban, midabada, iyo dabeecada (garaadka).
Sannadkii 2004, noocii ayaa loo beddelay Alsatian Shepalute - Alsatian oo ka soo jeeda magaca hore ee Adhijirka Jarmalka 'Alsatian Wolfdog', iyo isku darka Shepherd iyo Malamute.
Lix sano ka dib, maadaama eeygan loo soo saaray sidii loo yaqaan 'purebred', waxay go'aansadeen inay u bixiyaan faraca magac ku habboon iyaga oo iska dhigaya Shepalute una beddelaya Alsatian Mareykan ah.
Naadiyada waaweyn ee looxa sida American Kennel Club (AKC) wali ha aqoonsan taranka this. Alsatian wuxuu kaliya ka diiwaan gashan yahay Diiwaanka Alsatian ee Qaranka Mareykanka.
Laakiin eeygan wuxuu leeyahay naadi u gaar ah, National American Alsatian Club ( NAAC ), taas oo mas'uul ka ahayd Mashruuca Dire Wolf ilaa 2004.
Sida laga soo xigtay Schwarz, ku xad gudubka nooc kale wuxuu caawinayaa caafimaad wanaagsan . Waxay isku qastaa waxyaabo waxayna keentaa arrimaha caafimaadka ee dib-u-dhaca.
Taasi waa sababta ay uga gudubtay Alsatian eeyaha kale sida:
Irish Wolfhound qalfoofkiisa, dhererkiisa, jaakadiisa siligga, dareenkiisa, iyo caqliga shucuurta.
Labrador dib u habeyn cagaha, dabada gaaban, midabada, iyo garaadka.
Samoyed indhaheeda oval, dabo gaaban, iyo saaxiibtinimo.
Akita madaxiisa, dhagaha, jirkiisa, dabo gaaban, iyo guntin.
Isgoyskaas oo dhan ka dib, Alsatianku ma lahan dabeecaddiisa iyo muuqaalkiisa. Marka maxaa ka duwan?
Isbarbardhiga Alsatian-ka iyo eeyahooda aasaasiga ah
Kaniiniyada loo isticmaalo soo saarista nooc cusub waxaa loo yaqaan eeyaha aasaaska. Alsatian-ka, waxay u ahayd Alaskan Malamute iyo Jarmal Shepherd.
Iskudhafkan 'Shepalute', Schwarz wuxuu moodayay inay wali aad ugu egyihiin Adhijirka Jarmalka. Waxay go'aansatay inay u gudubto noocyo badan, iyadoo na siineysa Alsatian Mareykan ah oo aan maanta heysano.
American Alsatian iyo Jarmalka Shepherd
Marka loo eego Adhijirka Jarmalka , Alsatian-ka Mareykanka ayaa ka ballaaran kana culus. Waxay leeyihiin jaakad dheer oo u baahan dayactir dheeraad ah, laakiin si fiican ayey ugu dulqaadan karaan cimilada qabow.
Alsatians sidoo kale waa caafimaad oo leh cimri sare. Waxay u baahan yihiin jimicsi yar waxayna leeyihiin heer dhaqdhaqaaq oo hooseeya. Sidaas darteed haddii aad doorbido eey aad u firfircoon, Adhijirka Jarmalka ayaa ah ikhtiyaarka ugu fiican.
American Alsatian iyo Alaskan Malamute
Waalidka kale, American Alsatians ayaa leh ka weyn ka badan Alaskan Malamutes . Waxay leeyihiin a jaakad dheer taas oo sidoo kale u baahan qurxin badan, laakiin Malamutes wuu u dulqaadan karaa cimilada darajada xun.
Alaskan Malamute wuu ka madax adag yahay Alsatian-ka Mareykanka. Xitaa haddii Alsatian yahay caafimaad , Malamute wuxuu leeyahay cimri dheer.
Waxaad u maleyn kartaa in yeyda xun ee taxanaha taxanaha ah ee TV-yada Game of Thrones ay tahay Alsatian, laakiin maahan.
Alsatians-ka Mareykanka waxay leeyihiin cayiman muuqaalka iyo baaxadda taasi waxay ka dhigeysaa inay iyaga la mid yihiin yeyda dhabta ah ee ba'an.
Bakooradani waxay leedahay dhegaysan, dhegaha saddex geesood ah Kuwaas oo dushooda kor saaran madax ballaaran oo foorara . Kuwa ay yicib u eg indhaha wuxuu noqon karaa mid yar ama dhexdhexaad ah oo leh midab u dhexeeya huruud ilaa bunni fudud. Alsatiansku waxay leeyihiin sanka madow , laakiin tooda muuska madow mararka qaarkood waxay noqon kartaa kareemo ama cadaan.
Eygan weyn ayaa leh murqaha iyo jir dheer ku dhammaanaya a dabo ballaadhan, oo duuban . Alsatianku wuxuu leeyahay qaabdhismeedka lafaha qaro weyn oo cufan oo lagu daray a dhabarka iyo laabta ballaaran .
American Alsatian wuxuu leeyahay laba nooc oo jaakad ah, midkoodna waa hypoallergenic.
Qaro weyn jaakad jiilaal waa jaakad laba jibbaaran oo dhogor aan badnayn oo cufan lehna jubbado jilicsan. Waxay leedahay dherer dhexdhexaad ah, oo siinaya xoogaa muuqaal dhogor ah kanaaskan.
The jaakad xagaaga waa mid khafiif ah oo gaagaaban oo dhammaan koodhadhka hoosta ka daadanaya, kana tagaya timaha dibadda ah.
Houndani waxay leedahay midabbo jaakad badan, leh silsilad qalin ah sida midka ugu jecel. American Alsatian sidoo kale wuxuu yimaadaa:
Lacag cawlan oo Wolf / sable ah
Sable dahab ah
Kala soocida ciidda
Tri cawlan oo dahab ah
Tri lacag ah
Lacag madow oo madow
Markaad qaadaneyso eey Alsatian ah oo Mareykan ah, ha ka welwelin haddii aysan muujin mid ka mid ah midabadan. Waxay ku dhasheen jaakad jilicsan oo madow oo jilicsan oo u fudud kareemka.
Waxay heli doonaan jaakadooda qaangaarka ah ee qaangaarka ah inta ay leexanayaan 1 jir .
Intee ayey la egyihiin Alsatians-ka Mareykanka?
Alsatianku waa a waaweyn ama weyn eey meesha labku ku kori karo 26 illaa 32 inji (66 ilaa 81 cm) oo dherer ah oo udhaxeeya 90 ilaa 110 rodol (41 ilaa 50 kg). Dheddigga ayaa ku kala duwan 25 ilaa 28 inji (64 ilaa 71 cm) oo dherer ah oo leh miisaan 85 ilaa 105 rodol (39 ilaa 48 kg).
Eeyaha Alsatian-ka ah ee Mareykanku waxay gaarayaan cabirkooda oo buuxa markay gaadhaan da'da 3, welina way buuxin karaan illaa 9-jir.
Iyaga oo baaxad weyn leh, ayay ma noqon doonto raaxo ku nool aqal yar. Waxay kufiicantahay sinadani inay ku noolaato guri leh daarad waasac ah.
Xitaa haddii noocani u eg yahay xayawaan duurjoog ah, way la jilicsan yihiin sidii wan yar. Waa sababta oo ah Schwarz wuxuu rabay Alsatianku inuu yeesho dabeecad wehel.
Aan aragno sida dabaylkani u noqday.
Waxay heshay muuqaalada yeyda laakiin shakhsiyadda wanka
Waxay u muuqdaan kuwo qatar ah, laakiin ma ahan kuwo dagaal badan ama duurjoog ah. Looma baahna in laga baqo iyaga maxaa yeelay Alsatian-ka Mareykanka waa saaxiibtinimo iyo soo dhawayn , laakiin eeygan sidoo kale wuxuu noqon karaa ka fogayn shisheeyayaal. Waxay ubaahanyihiin isdhexgal sax ah si ay u ogaadaan shisheeyaha ay saaxiibka yihiin ama hanjabaadaha dhici kara
Waxaa loo soosaaray inuu yahay kalsooni weyn oo dhogor badan, layaab malahan in kanaankan uu ku habboon yahay qoysaska. Alsatians waa ugaarsooyin jilicsan oo si wanaagsan ula jaan qaadi kara carruurta, laga jaray astaamaha xiisaha leh ee noocyada kale. Waxay doorbidaan inay ku raaxaystaan ​​sariirta sariirta kuwa ay jecel yihiin.
Waxay sidoo kale la jaanqaadaan eeyaha kale iyo xayawaanka guriga joogaa maxaa yeelay iyaga ha haysan gaari aad ugaadhsato oo sareeya .
Hound weyn laakiin u aamus sida jiirka
Haddii aad rabto eey aamusan, bakooradani waa xulasho aad u fiican. Mareykanka Alsatian marar dhif ah ayaa qaylinaya, oohin, ama oohin . Khasaaraha - kuma tiirsanaan kartid inay noqdaan eeyo ilaaliya.
Ma ahan xayawaan cadowtinimo ama dagaal badan. Laakiin baaxaddooda ballaaran iyo astaamaha wax ku oolka leh ayaa ku filan inay hanjabaadaha badankood iska baxaan.
Iyagu ma noqon karaan ilaaliye, laakiin iyagu waa ka duwan yihiin sida a adeeg ama ey daaweyn .
Alsatianku waa nooc deggan, oo u oggolaanaya inay u shaqeeyaan sidii isu-dhaqdhaqaaq dhaqdhaqaaqa ama eyga baaritaanka suuxdinta iyo ka caawinta dadka qaba PTSD, maqal la'aanta, iyo autismka. Ilaa iyo inta aysan ahayn shaqo qallafsan, way xamili karaan.
Alsatian-ka Mareykanka wuxuu u eg yahay dhul wuxuuna doorbidaa inuu guriga joogo. Marka loo barbardhigo noocyada kale ee waaweyn, qashinsashadani ma wareegaan oo kama cararaan guriga. Markaa inkasta oo ay le'eg yihiin, ma heli doontid bakhaarkaaga uumiga ah ee ka boodaya ama qodaya hoostiisa.
Haddii aad u tagto tarankaan, waxaad heli doontaa eey ku dheggan. Eygan waxaa loo yaqaan ereyga Alsatian 'bonding' , taas oo macnaheedu yahay haddii milkiilayaashoodii la waayey, dhaqso ayey u aadi doonaan si ay u helaan.
Eeyadan daacadda ah waxay ku dhegi doonaan sayidyadooda inta suurtogalka ah. U diyaari naftaada eey 100 rodol oo rodol ah oo aan u oggolaan doonin cabbirka inuu ku dhaqmo ama ku dul fadhiisto.
Kufiican milkiilayaasha firfircoon yar
Haddii aad rabto eey gadaal loo riixo, noocani waa xulashada saxda ah! Xitaa haddii ay u egyihiin inay socod ku mari karaan, ma ahan kuwa jecel inay si aad ah u dhaqaaqaan. Marka loo barbardhigo noocyada kale ee waaweyn, waxay leeyihiin heerarka tamarta hooseeya - laakiin waxay weli u baahan doonaan jimicsi.
Alsatians-ka Mareykanka waa inay jimicsi sameeyaan ugu yaraan saacad maalintii . Waxay ku raaxeysan doonaan socod lug ah oo ku wareegsan xaafadda ama wareeg laga soo qaado beerta tan iyo markii ay heli doonaan inay waqti kula qaataan.
Waqtiga ugu wanaagsan ee jimicsi ama tababar lagu sameeyo Alsatian waa marka qabowgu jiro. Waxay kala yihiin ugu firfircoon inta lagu jiro galabtii ilaa fiidkii iyo subaxa hore.
Waxaa laga yaabaa inay kululaadaan markay tahay casar liiqda labbiska labadoodaba. Marka qorraxdu markay soo baxdo, filo inay dhex hurdaan ama fadhiistaan ​​meel qabow.
Si fudud loo tababaro
Noocani waa caqli badan , sidaa darteed waxaad heli doontaa waqti sahlan oo aad ku tababarto.
Ka bilow addeecid tababarka jabinta guriga, gaar ahaan haddii ay ku noolaan doonaan gudaha gurigaaga. Iyada oo ay le'eg tahay, waa inay bartaan da'da hore sida ay naftooda u dhaqmaan.
Ka fogow ciqaabta markasta oo aad tababareyso Alsatian-kaaga Mareykanka ah. Naftaada u dhig sida qof jecel alfa , adag laakiin waxay bixisaa daaweyn iyo dhiirigelin.
Sida eey kasta, joogtaynta iyo xoojinta wanaagsan ayaa ka caawin doonta inay si dhakhso leh wax u bartaan.
Waxaad ku arki kartaa fiidiyowgaan sida dadka Alsatianska loogu tababaro xerooyinka kabaha eeyaha:
Ka dib barashada dabeecadda Alsatian, waa waqtigii la ogaan lahaa sida loo daryeelo iyaga.
Maaddaama Alsatianku yahay nooc ballaaran, iyaguna sidoo kale waa kuwo dayactir sarreeya, gaar ahaan inta lagu jiro xilligooda daadinta.
Jadwalka qurxinta Alsatian ee Mareykanka
Markay xagaa timaado, badiyaa inta udhaxeysa Maarso ilaa Abriil, Alsatians waxay ku daadin doonaan dhamaan timahooda gudaha jaakadooda xagaaga.
Maaddaama ay kaliya haystaan ​​jaakadooda dibadda si ay uga ilaaliso qorraxda, waxaa fiican inaad ku ilaaliso canine-kaaga gudaha ama hooska hoosta si looga ilaaliyo inuu fuuqbaxo.
Koodhka hoostiisa la'aanteed, waa caadi eeygaaga inuu u muuqdo mid madow ama khafiifa xilligan. Alsatianku wuxuu dareemi doonaa cuncun, marka ka caawi isaga inaad ku cadayato jaakadiisa a shanlo bir ah oo ballaaran . Samee hal mar maalintii ama maalin kasta oo kale inta lagu gudajiray daadinta. Ka dib markii ay dhammaantood wada baxaan, iyaga ayaa bilaash lagu daadin doonaa.
Taasi waxay sidoo kale ka dhigan tahay in faaruqintaadu la kulmi doonto shaqo badan tan iyo markii hawsha daadinta ay qaadato ilaa bil . Bisha Sebtembar, joodhadhkoodu wuxuu bilaabanayaa inuu dib u soo laabto.
Ka baxsan xilligooda daadin ama markay haystaan ​​jaakad qaboobaha, way fiicantahay inaad cadayato Alsatian ugu yaraan hal mar ama laba jeer usbuucii . Timahooda qurxoon sidoo kale ur ma leh waxayna diidaan wasakhda, markaa waxay u baahan doonaan oo keliya a qubeys markii loo baahdo.
Uguyaraan bishiiba mar , Kafiiri dhegahooda wixii wasakh ah ama globs-ka ah. Iska ilaali infekshinka oo ku nadiifi maro qoyan inta lagu jiro ama ka dib qubays kasta. Ciddiyahooda, waxaad u baahan tahay oo keliya jar sanadkii hal mar .
Sii Alsatian-kaaga Mareykanka ah laba koob ee kibble-tayo sare leh maalintii. Waxaad ku dari kartaa budada dheeriga ah ee fiitamiinnada iyo macdanta.
Maxaa diidaya saxankooda sare jiis jiis, jiir, iyo jiis la shiiday si loogu daro dhadhan? Mararka qaarkood, ku dar digaag yar oo karsan mid ka mid ah cuntadooda. Xaqiiqdii way jeclaan doonaan!
Dadka Alsatians ka yar, sii saddex ilaa afar koob cuntada qalalan eey maalin kasta. Cunnadooda ugu horreysa, waxaad siisaa kaliya kibiblayaasha. Cunnooyinka soo socda, waxaad sidoo kale ku dari kartaa maraq hilib isku jira, jiis, ama digaag iyo bariis si aad ugu qanciso inay wax badan cunaan. Waad ku sii wadi kartaa cunnadan illaa eeyahaaga uu ka noqdo 1-sano jir.
Hubso inaadan si xor ah u quudin eeygaaga maxaa yeelay waxaa laga yaabaa inay culeys saaid ah yeeshaan. U oggolow inay la qabsadaan waqtiga quudinta ee habboon, sidaa darteed bakooraddaadu waxay heli doontaa qaddarka saxda ah ee adeegidda iyo dhammaan nafaqooyinka uu u baahan yahay.
Xilligan, ma jiri karaan arrimo caafimaad. Mid ka mid ah ahmiyadaha Schwarz ee horumarinta Alsatian ayaa ah inay noqoto mid caafimaad qaba. Waxay tan ku sameeyeen iyagoo sii wadaya safka eeyaha aan jiranayn. Laakiin weli waxaa jiray eeyo qaarkood la kulmay arrimo caafimaad.
Waa kuwan cudurada laga helo noocani sanadihii la soo dhaafay:
Iyada oo ay waxaas oo dhami jiraan, waxaad heli doontaa inaad waqti dheer la qaadato Alsatian-kaaga Mareykanka ah tan iyo markii ay nolol leeyihiin 12 ilaa 14 sano . Mashruuca Dire Wolf wuxuu wali ka shaqeynayaa kor u qaadista caafimaadkooda iyo cimri dhererkiisa. Waxay rabaan inay siiyaan noocyadan celcelis ahaan cimri ahaan 15 ilaa 20 sano, oo la mid ah yeeyda duurjoogta ah. Haddii ay guuleystaan, eeygaaga ayaa kula joogi kara 6 sano oo dheeri ah.
Waxaad ka baratay wax walba oo ku saabsan Alsatian - hadda waa waqtigii lagu ogaan lahaa inta iyo meesha laga helayo mid.
Maaddaama ay yihiin nooc cusub, kaydkan dhifka ah ma noqon doono mid rakhiis ah. Eeyaha Alsatian ee Mareykanka waxay leeyihiin celcelis qiimihiisu yahay $ 2,000 ilaa $ 3,000 .
Qiyaasta qashinka ee 5 ilaa 12 eey, waxay yeelan doonaan muuqaalo kala duwan iyo dabeecad saameyn ku yeelan doonta qiimahooda. Waxay kuxirantahay breeder, goobta, iyo tayada keydka taranka si loo helo nooc eey ah, qaar Alsatians ah waxay ku kici karaan ugu badnaan 10,000 oo doolar.
Sumeeyayaal caan ah oo Mareykan ah oo Alsatian ah
Si lagaaga caawiyo inaad heshid Alsatian-kaaga, halkan waxaa ku yaal liis ay ku qoran yihiin nacfiyada sumcadda leh ee ay qireen Schwarz iyo NAAC.
Guryo madow (Oregon)
Eeyga Dire Wolf ee Vallecito (Washington)
Eygii Dire Wolf ee Fennario (Colorado)
Alsatiyiinta Mareykanka ah ee u baahan guri
Sababtoo ah Alsatian waa nooc cusub oo dhif ah, way adag tahay in laga helo xarumaha korsashada ama hoyga.
Haddii aad raadineyso inaad korsato ama mid samatabbixiso, hubi Am. Samatabbixinta Alsatian , hay'ad samatabbixin aan faa'iido doon ahayn, haddii ay jiraan eeyo la heli karo.
Markaad helaysid eey, waa lagama maarmaan inaad tixgeliso inay ku habboon yihiin qoyskaaga ama qaab nololeedkaaga. Waa inaad awoodid inaad ballanqaaddo labiskooda iyo jimicsigooda sidoo kale.
Markaa haddii aadan weli hubin haddii Alsatian-ka Mareykanku yahay wehel sax ah oo adiga kugu habboon, waa kan sida ay u barbar dhigaan kuwa kale ee digaagga u eg.
American Alsatian iyo Shiloh Shepherd
Shiloh Shepherd ( xigasho )
Alsatian Mareykan ah waa ka yar ka badan Shiloh Adhijir . Waxay kala yihiin firfircoonaan yar waxayna ubaahantahay jimicsi kayar Shilohs. Haddii aad haysato xayawaan kale, hel Alsatian maadaama Shiloh Shepherds aysan ahayn xayawaan-saaxiibtinimo.
Shilohku waxay qaadan karaan noocyo badan oo shaqooyin ah sida eey dhaqato ama ilaaliye. Waxay sidoo kale u muuqdaan inay qaylinayaan; marka hadaad rabto a ey badan oo aamusan , waxaa fiican inaad hesho Alsatian Mareykan ah.
American Alsatian iyo Asalka Hindida Mareykanka Asalka ah
Eyga Hindida Mareykanka Asalka ah ama NAID ( xigasho )
Alsatian Mareykan ah waa ka weyn ka badan Ey Hindi Mareykan Dhalad ah (NAID), laakiin miisaankoodu waa isku mid.
Alsatiansku waxay leeyihiin jaakad dheer oo u baahan qurxin badan . Waxay kaloo leeyihiin fursado midab jaakad badan .
Naidku wuu ciyoodaa inbadan, markaa haddii aad doorbideyso eey aamusan, hel Alsatian-ka. NAIDs sidoo kale waa kufiican yihiin dadka leh qaab nololeed firfircoon tan iyo markii ay noqon karaan ugaarsi iyo saaxiibbo kalluumeysi.
Labada eeyba waa nooc caafimaad leh, laakiin NAID waxay leedahay arrimo caafimaad oo kayar kana nolol dheer kan Alsatian.
American Alsatian iyo King Shepherd
King Shepherd ( xigasho )
The Boqorka Shepherd waa isku darka Adhijirka Jarmalka, Shiloh Shepherd, Alaskan Malamute, iyo Pyrenees Weyn. In kasta oo ay leeyihiin dhammaan noocyadan waalid ee waaweyn, Alsatian waa ka weyn ka badan tan isweydaarsiga ah.
King Shepherds ayaa ku habboon shaqada, gaar ahaan xoolo raacista iyo quusidda. Waxay kaloo noqon karaan eey waardiye ah maaddaama ay si joogto ah u ciyaan. Hadaad rabto a sirta aamusan , Alsatianku waa ikhtiyaar ka fiican.
Hadaad waligaa rabtay a bakoorad weyn oo wehel ah , Alsatian-ka Mareykanka waa musharax weyn. Gunno kale ayaa leh heerar hoose oo dhexdhexaad ah , oo ku habboon kuwa jecel inay ku nastaan ​​guryahooda.
Noocani waa tababar fudud , iyaga oo ka dhigaya xulasho weyn milkiilayaasha eyda markii ugu horeysay. Waxay kaloo yihiin a nooc caafimaad leh , sidaa darteed uma baahnid inaad ka walwasho booqashooyinkaas caafimaadka xoolaha.
Haddii aad ku nooshahay aqal yar, maskaxda ku hay in eeygan uu weyn yahay uuna qaadan doono boos badan. Alsatians-ka ayaa ugu habboon guryo waasac ah sida kuwa leh daarad ama miyi.
Alsatianku waa a dayactir sare xayawaanka, sidaas darteed waa inaad waqti dheeraad ah gelisaa baahidooda hagaajinta. Daadiyayaashani kuma haboona kuwa xasaasiyadda ku leh, iyo kuwa aan xamili karin timaha eeyga gurigooda oo dhan.
Waxay u ekaan karaan yey, laakiin iyagu waa xayawaan saaxiibtinimo leh. Xaqiiqdii waad jeclaan doontaa inaad ku haysato gurigan jilicsan guriga.
Ma qorsheyneysaa inaad hesho Alsatian Mareykan ah? Waxaan jeclaan lahayn inaan maqalno safarkaaga. Noo soo sheeg qaybta faallooyinka ee hoose.
noocyada deenishka weyn ee jaakadaha
Adhijirka Australiyaanka ah ee shaybaadhka jaalaha ah
adhiga Ingiriisi hore iyo isku dhafka poodle
meeqa waa alaskan klee kai puppies
pitbull lagu qasay eeyga labrador